Fomba fanombatombana ny fahombiazanao amin'ny SEO amin'ny Semalt
INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA SEO?
ESSENTIALS ho an'ny PERFORMANCE SEO
FANDROSOAN-KEVITRA MOMBA NY FAHASALOHANA NY SEO
Isan'andro isan'andro dia tompon'ny tranokala, webmaster, mpandinika ary masoivoho marketing digital no mampitombo ny fahatsaran'ny toeran'ny tranonkalany na ny tranonkalany ho an'ny valim-pikarohana Google.
Ny ezaka rehetra ataon'izy ireo dia mihodina manodidina ny fe-potoana tokana, SEO . Ny fahafantarana sy ny fanatanterahana ny filana SEO dia manampy azy ireo hanatsara ny toeran'ny tranokala iray amin'ny SERPs (Pejy fikarohana momba ny valin'ny fikarohana).
Misy fitaovana azo alaina handinihana ny fanatontosana SEO ny tranokala iray, fa ny fitadiavana azy tsara dia tsy antonony amin'ny fandresena ny antsasaky ny ady atao.
Ity lahatsoratra ity dia manome anao fahatakarana ny famakafakana ny fanaovana SEO ary ny fomba ahazoana loharano azo antoka, Semalt, no manampy anao hahatratra ny tanjonao SEO.
Raha tsy mahavita mandray soa amin'ny alàlan'ny tranokala analytics an'ny Semalt ianao ianao, tsindrio eto ary hankafy. Azonao atao ihany koa ny manohy mamaky ny lahatsoratra ary mianatra momba ny fomba famakafakana ny fanatanterahana SEO amin'ny Semalt.
Inona ny atao hoe SEO Performance Analysis?
Ny fandalinana ny fampisehoana SEO dia ny fandinihana tsara ny tranokala amin'ny marika SEO mifandraika isan-karazany. Ahitana ny fanamarinana tranonkala iray ary ny famaritana ny filàna Optimization ho an'ny laharana avo kokoa amin'ny SERPs.
Ny famakafakana ny fahombiazan'ny SEO dia manampy anao hahita na mandeha amin'ny alàlan'ny paikady SEO anao ary inona no olana, miantraika amin'ny laharan'ny tranokalanao.
Ny maha-zava-dehibe ny famakafakana Performance SEO
Manampy anao amin'ireto manaraka ireto ny fahatsapan-kevitra nomen'ny famakafakana amin'ny fanaovana SEO tamin'ny farany:
Fanampiana amin'ny fanitarana ny tanjonao.
Mandeha fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao.
Izy io dia manampy ny laharan'ny tranokalanao ho ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana.
Mamela anao hahatratra ny tanjonao matihanina haingana.
Amin'ity famakafakana ity dia mandray fanapahan-kevitra tsara sy stratejika ianao. Ny fotoana sy ny vola takiana amin'ny fanatsarana ny laharan'ny tranokalanao dia mihena be ihany koa.
Raha tsy eo ny fandalinana lalina momba ny SEO asa, ny fanapahan-kevitra raisina hanatsarana ny toerana misy ny tranonkala amin'ny valim-pikarohana Google dia saika tsy ho tanteraka.
Zava-dehibe amin'ny fampisehoana SEO
Ny fivoaran'ny farany ho an'ny algorithma Google dia mifantoka amin'ireo tranokala manome valisoa amin'ny alàlan'ny votoatiny, fa tsy ny fanodinana teknika fotsiny mba hahatrarana avo kokoa.
Misy fototra SEO marobe manampy amin'ny famakafakana sy manara-maso tranonkala iray. Ny tena ilaina dia:
Relevancy ny teny fanalahidy
Traikefa amin'ny mpampiasa
Famoahana famoahana votoaty
Andeha hianarantsika tsirairay avy:
Ny tranokala rehetra dia tokony hanome fampahalalana ara-teknika amin'ireo mpikirakira tranonkala mba hahafahan'izy ireo manakatra sy mamantatra ary manao lisitra azy ireo amin'ny valin'ny fikarohana. Ireo teknisianina ireo dia mavitrika na passive, miankina amin'ny fihetsiky ny tompon'ny tranokala.
Ny teknolojia mavitrika dia misy ny hetsika noraisina hampahafantarana ireo milina fikarohana momba ny fiovana amin'ny tranonkala iray. Ohatra iray amin'ity fomba ity ny fampifandraisana ny tranokalanao amin'ireo fitaovana webmaster an'ny milina fikarohana ho an'ny fanaraha-maso ny asany SEO.
Ny teknolojia pasifika dia misy ny hetsika noraisina mba hanomezana ny milina fikarohana ny fampahalalana ilaina amin'ny takelaka indeks. Ohatra iray azo atao amin'ny alàlan'ny fanaingoana dia ny fanomezana rakitra XML any amin'ireo milina fikarohana mba ahafahan'izy ireo tsara kokoa hoe inona no ilana ny atiny.
Raha tsy misy SEO ny tranokalanao, dia fako daholo ny ezaka ataonao amin'ny famoronana sy famokarana votoaty mahafinaritra satria tsy mahomby ny mombamomba ny mpikaroka.
Ny teny fanalahidy dia teny na fehezanteny ampiasain'ny olona hikaroka vokatra, serivisy na fampahalalana amin'ny alàlan'ny milina fikarohana. Ireo mpamoaka votoaty sy tompon'ny tranokala dia mamantatra ny teny fanalahidy indrindra ampiasaina amin'ny fikarohana ny vokatra na ny serivisy, ary noho izany, mamorona atiny mifanaraka.
Rehefa hitanao ny teny fanalahidy mifandraika indrindra amin'ny fanatitrao, dia mora ny mamorona atiny amin'ny fampiasana azy ireo. Vokatr'izany dia mahasarika fifamoivoizana hatrany ny tranokalanao.
Mariho fa tsy tokony hampiasa diso tafahoatra ianao, na hanararaotra, na hanararaotra ny teny fanalahidy satria rehefa mitranga izany dia tsy mandany fotoana be ny lozika fikarohana amin'ny famaizana tranonkala iray.
Mifampiresaka amin'ny pejin-tranonkala ny tranokala, ary ireo tranokala ireo dia tsy maintsy mifantoka amin'ny coding content (manaraka ny torolàlana sy fitsipika voafaritra momba ny atiny) mba hanamafisana ny fahatongavana sy ny lozisialy fikarohana ho an'ny tranonkala.
Ny fanodinana ao anaty votoaty dia ahitana ny firafitry ny pejin-tranonkala iray mety. Izy io dia tokony hanazava ny filaharan'ireo votoaty ao anaty tranonkala ho an'ny milina fikarohana. Hamarino tsara ny lohatenin'ny pejy web, ny lohateny sy ny lohatenin'ny lohateniny (H1, H2, H3, H4), ny fomba fanalana azy ary ny zavatra hafa dia haingoina ho an'ny fanekena mora foana.
Tokony hampiasa teny fanalahidy mety koa ianao ary hihazona ny halaliny amin'ny pejin-tranonkalanao. Karakarao ihany koa ny torolàlana fametahana teny fanalahidy ho an'ny horonan-tsary sy sary.
Androany, ny backlink dia manan-danja satria mitarika ny laharan'ny tranokala amin'ny motera fikarohana izy ireo. Ny tranonkala backlink dia tranonkala mampitohy mankany amin'ny tranonkala iray.
Somary sarotra ihany ny fahafantarana ny lalao backlink. Misy zavatra roa tokony ho takatry ny iray:
Ireo tranonkala rehetra notononina tao amin'ny Google dia omena PageRank mifototra amin'ny isa tranonkala mampifandray azy ireo.
Ny backlink avy amin'ny tranonkala tokana misy ny PageRank avo dia manana lanja bebe kokoa raha oharina amin'ireo tranonkala backlink avy amin'ireo tranonkala an-jatony manana PageRank ambany.
Raha mahazo backlink avy amin'ny tranokala manana PageRank avo lenta ny pejin-tranonkalanao, manomboka mandinika ireo tranokalanao ho loharano kritika ny milina fikarohana, ary noho izany, dia misandratra ho ambony kokoa.
Ny haino aman-jery sosialy Media dia tena mandaitra rehefa mizara atiny. Ny fizarana lahatsoratra na rakitra haino aman-jery amin'ny sehatra media sosialy toy ny Facebook, Twitter, LinkedIn, sy ny hafa dia midika hoe mamorona backlink PageRank avo amin'ny tranonkala iray.
Satria saika misy fizarana rehetra amin'ny haino aman-jery sosialy, dia misy olona mihevitra fa ny fizarana bebe kokoa dia manatsara ny laharan'ny tranonkala iray. Eny, tsy 100 isan-jato no marina.
Ho an'ny milina fikarohana, sarobidy ny votoaty iray raha manana mizara bebe kokoa miaraka amin'ny fidirana avo kokoa. Tafiditra ao ny isan ny olona mahafinaritra, fanehoan-kevitra ary fandefasana sioka na refa fizarana.
Raha mitranga amin'ny tranokalanao izany, ny motera fikarohana dia ho tonga saina fa zava-dehibe ny votoaty ao ary manangona fankasitrahana amin'ny alàlan'ny hetsika. Ka izany dia hataon'izy ireo ambony kokoa amin'ny fomba voajanahary izany.
Ireo milina fikarohana, toa an'i Google dia mametraka tranonkala ho an'ny vohikala fotsiny, noho ny fanaraha-maso ara-teknika, teny fanalahidy, atiny, ary fizarana media sosialy fa noho koa ny tena traikefan'ny mpampiasa manana votoaty an-tranonkala.
Ny zavatra niainan'ny mpampiasa dia misy ny fananganana tranonkala sy ny fametrahana ny atiny ao. Ho fanampin'ny fototra hafa, Google dia mihevitra ihany koa ny fametrahana ny antso ho an'ireo hetsika amin'ny tranokala iray.
Google mankasitraka raha toa ny singa toa ny dokam-barotra na bokotra famandrihana na bokotra mividy dia azo idirana raha tsy manidina ny pejy. Eny, mahazo tombony amin'ny rakitry ny tranonkala iray izy.
Tsy midika akory ny fampiasana tsy fanao amin'ity fizarana ity (eo ambonin'ny vala). Ohatra, sazy i Google rehefa mahita fa manana doka bebe kokoa noho ny vala ny tranokalanao.
Ny tranonkala iray dia tokony hanana votoaty horesahina ary ho toerana misy ao amin'ny milina fikarohana. Raha misy pejy maro kokoa ao amin'ny tranokala, ny motera fikarohana dia manana rohy maro kokoa ho an'ny fanondroana.
Io no anton'ny laza sy fahombiazan'ny tranonkalam-baovao. Navoakan'izy ireo matetika ny votoaty izay, matetika, dia tsy mampitombo ny isan'ireo pejy voatonisa ihany fa ny fifamoivoizana ihany koa.
Misy ihany koa ireo bilaogy manokana izay mandefa lahatsoratra tsy tapaka miaraka amin'ny lohahevitra mitovy. Ity firafitra ity dia milaza amin'ny Google fa mahomby ireo bilaogy manokana ireo. Ka izany dia mampisondrotra azy ireo ambonimbony kokoa.
Izany rehetra izany dia midika fa laharam-pahamehana lehibe ny famoahana votoaty. Raha mandefa atiny vaovao sy efa optimina ary mifandraika tsara amin'ny tranokalanao ianao, ny motera fikarohana no hanara-maso azy sy hanatsara ny laharany.
Fakafakao amin'ny fampisehoana SEO miaraka amin'i Semalt
Ny fikarakarana ireo singa manan-danja rehetra amin'ny SEO dia tsy mora amin'ny olona iray. Izany no antony mahatonga ny orinasam-barotra nomerika, toa an'i Semalt, manana ny manam-pahaizana hiatrehana ireo singa SEO samihafa.
Ao amin'ny orinasa toa an'i Semalt , ny manam-pahaizana sasany dia mitantana ny fikolokoloana votoaty , ny sasany miraharaha teknika, ny sasany mifantoka amin'ny backlink, ary mitohy toy izao. Ny ezaka iraisan'ireo manam-pahaizana ireo dia miteraka fanatsarana ny asan'ny SEO tranonkala iray.
Semalt tolotra manaraka-anivon'ny tranonkala fanompoana Analytics hoe:
Manara-maso ny tsena ho anao
Tadiavo ny sangan'ireo mpifaninana aminao ary koa ny laharan'ny mpifaninana aminao
Hahazo fampahalalana feno momba ny orinasanao
Semalt dia manampy amin'ny KPI rehetra (Ireo mpamaritra fampisehoana fototra) ho amin'ny fahombiazan'ny SEO. Ny sasany amin'izy ireo dia:
Soso-kevitra momba ny teny fanalahidy
Rohy amin'ny teny fanalahidy
Tantara momba ny toerany
Fanaraha-maso ny marika
Ny famakafakana tranokala feno
Ny fifamoivoizana fikarohana
Fandraisana anjara amin'ny media sosialy
Ahoana ny fiasan'ny tranokala tranonkala?
Voalohany, mila misoratra anarana miaraka amin'i Semalt ianao ary manomboka amin'ny fomba ahazoana angon-drakitra famakafakana. Rehefa vita ny dingana dia hahazo tatitra amin'ny antsipiriany izay misy:
ny toeran'ny tranonkalanao
filaharana amin'ny mpifaninana aminao
fanombanana ny tranonkalanao momba ny fenitry ny indostria momba ny famoronana tranonkala sy SEO
Azonao atao koa ny manova ity tatitra an-tsipiriany ity amin'ny CSV ary koa format PDF ary misintona azy ireo amin'ny solosainao. Semalt dia mamela ny fandefasana mailaka ity tatitra an-tsehatra ity ihany koa.
Manomboka amin'ny famakafakana tranonkala dia mora ary maimaim-poana. Mila miditra amin'ny sehatry ny tranokala ihany ianao, ary ao anatin'ny iray minitra na roa dia ho fantatrao ireo antony manakana ny tranokalanao tsy hisondrotra ambony amin'ny valin'ny fikarohana.
Mba hanampiana ny tranokalanao amin'ny 'PRO analyse' maimaim-poana, azonao atao ny manindry eto ary manidina. Rehefa hitanao izany, ampidiro fotsiny ny anaran'ny tranonkalanao ary tsindrio ny bokotra 'Start Now'.
Ny famakafakana ny fanatontosana SEO dia tena ilaina amin'ny fanatsarana ny laharan'ny tranokala amin'ny milina fikarohana. Manampy anao hamantatra ireo anton-javatra tompon'andraikitra amin'ny fanonganana ny tranonkalanao.
Ny famakafakana no dingana voalohany hanatsarana ny asan'ny SEO tranokala. Mampahafantatra anao ny momba ny anton-javatra mitaky fanatsarana izany, ka asaovy aminy.
Na izany aza, ny fomba tsara indrindra dia ny fanakarena ny serivisy amin'ny masoivoho marketing digital, toa an'i Semalt. Miaraka amin'i Semalt, afaka miala sasatra amin'ny fandrianao ianao ary mijery ny tranokalanao dia lasa malaza be.